Edumile emhlabeni Da Hong Pao - "Esikhulu Esibomvu Robe" - eliyingqayizivele ezihlukahlukene itiye, okuyinto wayaziwa ezikhathini zasendulo. Ezihlabayo yalesi ezihlukahlukene etshalwa ku emaweni ku esiyingqayizivele Nature Reserve esifundazweni Wuyi. 4 "umzali" izitshalo, okwakuphume kuye bonke abanye, ngisho ukubonisa izivakashi ngesikhathi tour esiqiwini.
Nokho, ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi eqinisweni 'ingubo elikhulu elibomvu "njengoba uhlobo ahlukene yetiye akekho, nokuthi eqinisweni lokuthengisa, kufihliwe ngaphansi okuyinto inhlanganisela kuvamile Wuyi izinhlobo. Ukubona sezihlahla, abantu onolwazi ngokuvamile bathi ayikwazi ukususwa nge isivuno izinga. Ngaphezu kwalokho, inani okuthunyelwe ngaphansi kwalesi brand emakethe itiye ayihambisani nganekwane ukuthi ipulazi cishe nhlobo. izimfihlo eminingi kakhulu!
ukukhiqizwa itiye ubuchwepheshe akuyona ezahlukene kusukela inqubo esetshenziswa ukwenziwa nezinye izinhlobo. Siqukethe 5 zinyathelo: lokuqoqa amahlamvu, omiswe eyinhloko bese ukuthosa, mashing, omunye omiswe. Ngo esigabeni sesine, ukukhethwa kwendingilizi, kanye okungenani - hunpey, inqubo ekhethekile esetshenziswa emsebenzini wokukhiqiza oolong amnyama. Ingqikithi yale nqubo kuyinto eside itiye yokuwugazinga eshiya amalahle ezingeni lokushisa sasivumela ongaphakeme. Ngenxa yale njongo, Ababazi bakha kubhasikidi ekhethekile elinesinqe esikabili.
Noma yimuphi uchwepheshe uzokutshela ukuthi ezimbili zokugcina izigaba kucutshungulwa amahlamvu incike yi lokugcina: ukunambitheka kanye nephunga elimnandi yetiye. Izinga lokuwugazinga kuthinta ukugcwaliswa isiphuzo "isembatho Big ebomvu." Tea ukucubungula kungathatha indawo amahora ambalwa nje kuphela, okwenza kube lula, futhi kungase kuthathe izinqubo eziningana eside, bese ukunambitheka kwako iyoba amanothi Smoky, futhi ukunambitheka - ukugcwaliswa.
Ukuze ukhethe futhi ukuthenga itiye, musa uyinuke - ukunganaki zobugebengu, ngoba komunye inhlangano kwenye, yena ingahluka kakhulu. Umuntu akumelwe bazikhethele - okunjengokuthi ingabe iphunga kuye. Ngakho iseluleko kule ndaba lutho.
Yenza "Esikhulu Esibomvu Robe" abakwazi esisodwa. Abantu abaningi efana kakhulu 3 noma 5 Welding. Kuyinto indaba ukunambitheka, kodwa izikhathi ezingaphezu kuka-7 ukuze ugcwalise amahlamvu efanayo akunconywa. Ngokuvamile, i-enkomishini yamanzi abilayo ibusa amahlamvu isipuni futhi izinga lokushisa kwamanzi kufanele sifinyelele 95-100 degrees. Bagcizelele zidinga ukuphuziswa esingaphansi komzuzu.
"Esikhulu Esibomvu Robe" anezinye imiphumela ezithakazelisayo futhi akumangalisi lokhu. Okokuqala, it has nemiphumela ezuzisayo phezu impilo umzimba bebonke, futhi zonke izitho kumasistimu ethile. Okwesibili, ikhuthaza kwesisindo kumanani evamile, futhi normalizes umzimba.
Okwesithathu, kukhona umbono ukuthi kahle kususa Hangover, ukubuyisela umzimba amanzi-usawoti emzimbeni. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi "Esikhulu Esibomvu Robe" ngisho kuvimbela yokuguga anezakhi antioxidant. Nokho, Legends ezizungezile lolu hlobo itiye, okuthiwa ashiwo kuye njengoba imiphumela hallucinogenic efana umphumela izidakamizwa ezithile, ubufakazi ngalokhu kugomela akuyona.
Thinta umlando wasendulo nje inkomishi yetiye - yini kube mnandi? umlando onothileko ezithakazelisayo kwenza Da Hong Pao isiphuzo, okuyinto kuwufanele ngizame okungenani kanye empilweni.
Unqamule - kungcono zedivayisi futhi lokho isetshenziselwa?
Elwa Namagciwane TSifran. izidakamizwa yokusetshenziswa
Zokupheka Iningi okumnandi: Bhaka cod kuhhavini
Balance sheet - kuyingxenye ebalulekile akhawunti
Goulash yenkomo inhliziyo: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Kusho "Fenistil". Yokusetshenziswa
Coffee enemas: isimiso ukusebenza